OluKhetho lweeKhabhathi zeGumbi lokuhlambela, Ungaze uzisole ngokuYithenga!
Ikhaya / Blog / OluKhetho lweeKhabhathi zeGumbi lokuhlambela, Ungaze uzisole ngokuYithenga!
2020 / 10 / 11 uhleloBlog 1024 0
Xa kuziwa kwiikhabhathi zangasese, sonke siyayazi njengendawo yokuhlambela esemgangathweni, ethwele uxanduva olunzima lokugcina igumbi lokuhlambela. Ewe kunjalo, ukuba ukhetha igama elilungileyo, ixabiso lendawo yokuhlambela nayo inokuxhomekeka kuyo ukuphucula isandla.
Ke ukhetho lwekhabhathi yegumbi lokuhlambela alunakuba bubudenge, okokuqala, ukuya kubungakanani, kulandele ukulungelelanisa isitayile sokuhombisa igumbi lokuhlambela, njl., Khetha izinto ekubhekiswa kuzo, kulula ukubadida abantu.
Uyikhetha njani iKhabinethi yegumbi lokuhlambela?
1.Khetha ngokuhambelana nomoya wegumbi lokuhlambela
Ikhabhathi yegumbi lokuhlambela yeyona ndawo inomtsalane kwigumbi lokuhlambela, kunokuthiwa yimveliso ebalulekileyo yasekhaya ukubonisa ubumnini kunye nokungcamla komnini. Ke into yokuqala ekufuneka uyithathele ingqalelo xa uthenga ikhabhathi yokuhlambela isitayile sekhabhathi yokuhlambela, kufuneka ihambelane nesitayile sokuhombisa ekhaya.
Uhlobo olutsha lwesiTshayina
Uhlobo olutsha lwesiTshayina ayisiyo ikopi elula yesitayile saseTshayina, kodwa indibaniselwano yezinto zesiko ezikhutshwe kwisitayile saseTshayina nakwizinto zangoku.
Olu hlobo lwekhabhathi yegumbi lokuhlambela ngokubanzi ngumthi oqinileyo njengezinto eziphambili, kuyilo aluyi kusebenzisa ipateni enzima kwaye inzima, kodwa ukukhetha imigca yejiyometri elula. Ukusetyenziswa ngokubanzi kwesi sitayile sekhabhathi yokuhlambela kuya kubonakala kuyinto entle ngakumbi.
Uhlobo lwanamhlanje lweMinimalist
Iikhabhathi zanamhlanje zesitayile esincinci sihlawula ngakumbi ukusebenziseka kunye nobuhle. Ke ngoko, le ndlela yeekhabhathi zangasese iya kusebenzisa imibala elula yokuvela kombala, ngelixa umsebenzi wayo wokugcina unamandla kakhulu, kunokuthiwa lukhetho lokuqala kumakhaya amancinci.
Olu hlobo lwekhabhathi yegumbi lokuhlambela ngoku luthandwa kakhulu ngabantu abancinci abathandayo, kuba ilula kwaye inesisa kodwa ayilahli umbono woyilo, kodwa nangoninzi lwesitayile sasekhaya somdlalo ogqibeleleyo.
Isitayile saseMeditera ngokuqinisekileyo sesona sodwa sazo zonke iindlela zokuhombisa. Kuba isitayile saseMeditera sivela kunxweme lwaseSpain oluchukumisayo kunye namabhishi amhlophe anesanti emhlophe, mhlophe kwaye luhlaza okwesibhakabhaka yeyona mibala iphambili. Kwaye le mibala mibini inokudala ukuziva uthambile, ukhululekile.
2.Khetha ngokokuYilwa koBume
Ukuxhoma iKhabinethi yegumbi lokuhlambela
Iikhabhathi ezimiselweyo zokuhlambela zezona zikhethiweyo kumakhaya amaninzi. Ngenxa yoyilo olugqithisileyo emazantsi, olwahlula ikhabhathi emgangathweni, lusasaza ngokufanelekileyo ukufuma kunye nokufuma, kuthintela ukubakho kokufuma okuhlasela ikhabhinethi.
Ukongeza, ikwanezibonelelo zokunyusa imeko yendawo. Ke nokuba yindlu encinci, efakwe kule khabhathi yokuhlambela inoluhlu olufanayo lwekhabhathi yesipili, ayizukuziva inabantu abaninzi.
Iikhabhathi zeNdlu yokuGcina emiGumbini
Xa kuthelekiswa nokuxhoma iikhabhathi zangasese, olu hlobo lwekhabhathi yokuhlambela alunamfuneko kwiindonga xa zifakiwe.
Nangona kunjalo, kuba igumbi lokuhlambela limanzi ixesha elide. Ngokukodwa ukuba ikhaya alomile kwaye limanzi lodwa, iikhabhathi ezisemgangathweni ukuya kwigumbi lokuhlambela zihlala zinxibelelana namanzi, oko ke kubangele ukonakala kwikhabhinethi, kuchaphazela ubomi benkonzo.
Ke ngoko, xa uthenga iikhabhathi zangasese zomgangatho, qiniseka ukuba ukhethe umaleko wokungena manzi kabini wekhabhathi yokuhlambela, ekuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuba ulwakhiwo lwangaphakathi lwekhabhathi yegumbi lokuhlambela alikhubazekanga, ukwenzela ukwandisa ubomi benkonzo.
3.NgokweNgxelo yoKhetho lwezixhobo zeKhabhinethi
Xa kuthelekiswa nezinye izinto zekhabinethi yokuhlambela, iikhabhathi zomthi eziqinileyo zokuhlambela ngokuqinisekileyo zezona zinobuhlobo kwindalo kwaye zisempilweni, njengoko ifanitshala yeenkuni ihlala yenziwe ngokuthe ngqo kwiintlobo ezahlukeneyo zomthi njengezinto ezingafunekiyo.
Nangona kunjalo, ngenxa yokubalula kwendawo yokuhlambela, iinkuni zerabha zihlala zisetyenziselwa ukwenza iikhabhathi zangasese. Lo mthi ukhutshiwe kwaye uphelelwe ngamanzi, kunye nenkqubo yokuthintela amanzi ukuze ungangeni manzi kwaye ungabinamanzi.
Iikhabhathi zangasese ezenziwe ngezi zinto zinokwenza ngokulula indawo yokuhlambela enoluvo lwangoku kwaye kulula ukuzicoca. Nangona kunjalo, kufuneka ulumke ngezinto ezibukhali ukunqanda ukonzakala xa unkqonkqoza ngexesha lokusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Le nto intle kakhulu anti-isiliphu intsebenzo anti-ukukrwela, kunokuthiwa lolona lolondolozo lwezixhobo zekhabhathi yangasese.
Nangona kunjalo, izinto ze-PVC nazo zinokungalunganga: ukuba ubeka izinto ezinzima kuyo ixesha elide kulula ukuguqula, ngoko ke ubukhulu bayo ngokubanzi bekhabhathi yempahla yokuhlambela iya kuba ncinane, ifaneleke ngakumbi ukuba isetyenziswe ziintsapho ezintathu.
Uyigcina njani iKhabhinethi yokuhlambela?
1. Ukucoca iKhabhinethi yegumbi lokuhlambela
1, lokuhlambela amanzi contra amanzi kwikhabhinethi, ngesiqhelo ngelaphu elifumileyo kancinane asuswe ngobunono ukuthintela umhlwa okubangelwa ngamanzi.
2, esona sesicoci sokusebenzisa ukungathathi hlangothi, ukusetyenziswa ngokungaqhelekanga kwintlama yamazinyo kwigumbi lokuhlambela ikwayimveliso efanelekileyo yokuhlanjwa.
I-3, ikhabhathi yokuhlambela ihlala ibekwa kwisepha ethile, izinto zokucoca kunye nezinye iimveliso zokucoca, ukuhamba ngokungakhathali kwesicocisi kungcono ukucima kwangoko (okanye kwimveliso zokucoca ezingaphantsi komaleko welaphu).
2 Ukulungiswa kweKhabhinethi
I-Lacquer scuffs, ingachukumisi ipeyinti phantsi komthi, iyafumaneka ngombala wekhabhinethi ikhrayoni efanayo okanye i-pigment, kwikhabhinethi ye-trauma smear yokugubungela umbala wesiseko, kwaye emva koko isikhonkwane esikhanyayo esikhanyayo sinqabile.
Iingcebiso ezi-3 zoSetyenziso lweKhabinethi yoSuku ngalunye
1, igumbi lokuhlambela kwikhabhathi ekuphatheni, kufuneka iphakanyiswe kancinci kwaye ibekwe kancinci, musa ukurhuqa kanzima; ezifana nesipili sekhabhinethi kunye nomnxeba womhlaba, kufuneka unxitywe ngezinto ezithambileyo, ukuze ungatyumzi; umhlaba awukho tyaba, kufuneka ube yimilenze eqinileyo pad.
2, ukufakelwa kwamanzi kumbhobho kwaye uye kumbhobho wamanzi ukudibanisa uxineneyo, kwaye kufuneka ujonge rhoqo ukunqanda ukuvuza okuchaphazela ikhabhinethi.
3, ayizukusebenzisa izinto ezinzima ezibukhali ukukrwela umphezulu wekhabhinethi, ukuze ingabangeli umonakalo kumphezulu obangelwe kukungena kwamanzi.
4, ukuthintela ukukhanya ngqo, ukuthintela iKhabhinethi ekubeni zonakaliswe. Gcina igumbi lingene umoya.
Izitayile ezahlukeneyo, iindlela ezahlukileyo zeekhabhathi zangasese zihlala zikulethela amava ahlukileyo. Oku kungasentla malunga nokukhethwa kunye nokugcinwa kweekhabhathi zangasese, ndiyathemba ukuba izokukunceda.
Ngaphambili :: I-Smart, engenakunxibelelana, iCrossover ihamba ngokuPhambili! Ukuboniswa kweGumbi lokuhlambela elitsha lamanye amazwe next: OluKhetho lweeKhabhathi zeGumbi lokuhlambela, Ungaze uzisole ngokuYithenga!
Iintsapho zamaTshayina, ngenene azikufanelanga ukwahlukana okwesithathu?
Ezona ngcebiso ziBalaseleyo kwigumbi lokuhlambela, Zonke zikwindawo enye!
2020 / 10 / 16 1166
Isitayela se-4.95m2 saseScandinavia, eli gumbi lokuhlambela labaselula lininzi ngakumbi eSt ...
U-Kohler uthatha inkampani eyaziwayo yokuhlambela kwiNkundla yokuya kwiNkundla ngaphezulu kwe $ 1.4 ...
2020 / 10 / 14 911
I-Smart, engenakunxibelelana, iCrossover ihamba ngokuPhambili! New Brands Foreign Igumbi lokuhlambela Ex ...